Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ | Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet | Na-agba egwu
Blọọgụ niile sitere na The Reward Foundation
Ihe ọmụmụ ụlọ akwụkwọ
Mba 16 Summer 2022
Mba 15 Ụbọchị Valentine 2022
Mba 14 Mgbụsị akwụkwọ 2021
TRF na Press 2022
TRF na pọdkastị
Sistemụ ụgwọ ọrụ
Nyere aka na ịntanetị porn riri ahụ/ iji nsogbu
Vidiyo nkwenye afọ
Ọgbakọ nkwenye afọ 2020 Ihe
Akụkọ nkwenye afọ
Ndị nne na nna na-ekwu banyere ihe ndị gba ọtọ n’Ịntanet.
Ndụmọdụ 12 maka ndị nne na nna ịgwa ụmụaka banyere ihe gba ọtọ
14th nke February 2022
Mgbanwe nke PMO
Billie Eilish na-enye ụlọ ọrụ na-akpali agụụ mmekọahụ anya ojii
Simon Bailey: porn na-akpali ime ihe ike megide ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ
Ndina n'ike na Porn
Pịa ebe a maka More Blogs
Onyinye wardgwọ isgwọ bụ mmekọrịta ndị ọsụ ụzọ na ọrụ ebere gbasara mmekọahụ. Aha a sitere n'eziokwu bụ na usoro nkwụghachi ụgwọ nke ụbụrụ bụ ihe kpatara anyị ịchụso ịhụnanya na mmekọahụ yana ụgwọ ọrụ ndị ọzọ dị ka nri, ihe ọhụrụ na nnweta. Rewardgwọ ọrụ ụgwọ nwere ike ịdọrọ site na ụgwọ ọrụ siri ike dịka ọgwụ, mmanya, nicotine na ịntanetị.
Onyinye wardgwọ isgwọ bụ isi ihe na-egosi na ihe ọmụma gbasara mmekọrịta ịhụnanya na mmetụta nke ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na ahụike na ahụike, mmekọrịta, inweta na ụgwọ iwu.
Collegelọ akwụkwọ Royal nke General Practitioners kwadoro ụlọ ọrụ ọzụzụ anyị maka nlekọta ahụike na ndị ọkachamara ndị ọzọ banyere mmetụta nke ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na iche echiche na ahụ ike anụ ahụ, gụnyere mmekorita nwoke na nwanyị. N'ịkwado nke a, anyị na -eme nyocha gbasara ịhụnanya, mmekọahụ na ịntanetị nwere ike ịnweta ọha. Lee anyị n'efu Atụmatụ atụmatụ maka ụlọ akwụkwọ dị ugbu a na webụsaịtị a yana na Weebụsaịtị mgbakwunye agụmakwụkwọ, kwa n'efu. Leekwa nke anyị Ntuziaka ndị nne na nna na-ekiri ihe ndị gba ọtọ ịntanetị. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị ekwe omume ikwu maka ịhụnanya na mmekọrịta mmekọahụ taa na-ekwenyeghị na ọrụ ịntanetị. Ọ na-emetụta atụmanya na omume, ọkachasị n'etiti ndị nọ n'afọ iri na ụma.
Research site na British Board of Film Classification achọpụtala na UK na ụmụaka nde 1.4 kwa ọnwa na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Afọ iri na anọ ma ọ bụ karịa bụ afọ 60 pasent nke ụmụaka mbụ hụrụ porn na ntanetị. Ọtụtụ, pasent 62, kwuru na ha mere ngọngọ na ya na mberede ma ghara ịtụ anya ịhụ ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Ọtụtụ ndị nne na nna, pasent 83, ga-achọ ịhụ nkwenye afọ maka saịtị ndị a na-emerụ ahụ. Ihe dị ka pacenti iri isii na isii n’ime ụmụaka dị n’agbata afọ iri na otu na iri na atọ ga-achọ ka e chebe ha pụọ ​​n’ihe ndị ‘karịrị afọ 56’ n’ onlinentanet.
Anyị na-akwado nkeji 2 a -aga aga dị ka primer. Maka ezigbo nkọwa banyere mmetụta porn na ụbụrụ, lee nke a Ihe nkeji nkeji 5 site na ihe ngosi TV. Ọ na-egosi nyocha, nyocha sitere na Mahadum Cambridge na ahụmịhe ndụ nke ụfọdụ ndị ọrụ na-eto eto.
Nke a bụ ụfọdụ mfe nyocha onwe Omume nke ndị ọkachamara n’akparamàgwà na ndị na-ahụ maka ahụike haziri iji mara ma porn na-emetụta gị ma ọ bụ onye gị na ya dị nso.
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ n’Intanet adịghị ka foto ndị gba ọtọ. Ọ bụ ihe mkpali 'supernormal'. O nwere ike imetụta ụbụrụ n'ụzọ yiri nke ahụ cocaine ma ọ bụ heroin mgbe ọ na-agbadakarị mgbe niile. Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ adịghị mma karịsịa maka ụmụaka ndị mebere 20-30% nke ndị ọrụ na saịtị ndị okenye. Naanị nke a gosipụtara iwu gọọmentị gọọmentị nke UK igbochi ohere ụmụaka na ichebe ahụike ha.
Mụaka dị ihe dị ka afọ asaa na-ekpughere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ siri ike n'ihi enweghị nyocha dị ka afọ dị research Ọ bụ British Board of Film Classification nke enyere ya aka. Emere ihe-nzuzu ka uru, o bu ulo oru ihe ijeri dola ijeri. Emeghị ya ka ọ kụziere ụmụaka banyere mmekọahụ na mmekọrịta.
Nnwale Ọmụmụ Mmemme Na-enweghị Echiche
Ọ dịtụbeghị mgbe ọ bụla n'akụkọ ihe mere eme ka enwere mmekọahụ dị ukwuu nke na-akpali akpali dị ka ọ dị ugbu a. Ọ bụ nnwale kasịnụ, mmekọrịta mmadụ na-achịkwaghị achịkwa n'akụkọ ihe mere eme nke ihe a kpọrọ mmadụ. N'oge gara aga, o siri ike ịnweta ihe na-akpali agụụ mmekọahụ. O sitere na ụlọ ahịa ndị okenye enyere ikikere nke gbochiri onye ọ bụla n'okpuru afọ 18. Taa, ọtụtụ ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-enweta n'efu site na smartphones na mbadamba. Nyocha dị irè nke afọ maka ndị ọbịa na-efu efu. Useuseụbiga mmanya ókè na-emepụta a dịgasị iche iche of iche echiche na anụ ahụ nsogbu ahụike dịka nchekasị nke ọha na eze, ịda mbà n'obi, mmekorita nke mmekọahụ na ahụ riri ahụ ịkpọ aha ole na ole. Nke a na-eme n'ofe ọgbọ niile.
Nnyocha na-egosi na ị pornographyụ ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị nwere ike ibelata mmasị na, na afọ ojuju site na, ezigbo mmekọrịta mmekọahụ. Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ụmụ okorobịa na ndị toworo eto enweghị ike iso ndị ha na ha nwee mmekọahụ nwee mmekọahụ. Ndị na-eto eto na-eme ihe ike ike na ime ihe ike n'omume mmekọahụ.
Ebumnuche anyị bụ inyere ndị okenye na ndị ọkachamara aka ịnweta ihe aka ha chọrọ iji nwee obi ike iji mee ihe kwesịrị ekwesị iji nyere ndị ọrịa, ndị ahịa na ụmụaka aka. Oge oge iwepu masturbation, ma ọ bụ ibelata oge ọ bụla, bụ maka ịgbake site na ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na nsogbu mmekọahụ - ọ dịghị ihe ọzọ.
'Ike Intanet' Intanet Pornntanetị
Eta oke na porn nwere ike inwe mmetụta ọjọọ na ahụike mmekọahụ, ọnọdụ uche, akparamagwa, mmekọrịta, inweta, imepụta ihe na mmebi iwu. Ruo ogologo oge onye ọrụ na-aga n’ihu, ụbụrụ na-agbanwewanye ma sie ike ịgbanwe. Mgbe ufodu eji eme ihe adighi adi ihe ojoo. Mgbanwe ụbụrụ arụmọrụ enweela ederede dị ihe dị ka awa 3 iji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ kwa izu.
Brabụrụ anyị emeghaghị iji nagide oke ume. Aremụaka kachasị emetụta ngwangwa na-enweghị ngwụcha nke ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ ịntanetị. Nke a bụ n'ihi nsonaazụ ya dị ike na ụbụrụ ha dị nro na isi mmalite nke mmepe mmekọrịta na mmụta.
Imirikiti ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị taa anaghị egosipụta ezigbo mmekọrịta na ntụkwasị obi, kama ọ bụ inwe mmekọahụ na-adịghị mma, ịmanye mmadụ na ime ihe ike, ọkachasị ndị inyom na ndị agbụrụ na agbụrụ. Childrenmụaka na-emebe uche ha ka ọ dị mkpa ịchọpụta ihe ọhụụ na oke mmụọ mmụọ na-enweghị atụ, ndị ha na ndị na-ebikọ ndụ n'ezie enweghị ike ịha. Ọ na-azụ ha kwa ka ha bụrụ ndị ọrụ ụgbọ oloko.
N'otu oge ahụ ọtụtụ na-enwe mmetụta adịghị mma na agụụ mmekọahụ na-akọ na ha adịghị mkpa ịkpa ike na mmekọrịta chiri anya maka ogologo oge. Nke a na - eduga na owu ọmụma, nchekasị mmekọrịta mmadụ na ịda mba na ọnụ ọgụgụ na - arịwanye elu.
Ọtụtụ n'ime ndị na-eto eto oge mbụ ikiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ bụ ihe ọghọm, ihe karịrị 60% nke ụmụaka 11-13 bụ ndị hụrụ ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-ekwu na ikiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ bụ amaghị ama dị ka na-adịbeghị anya research. Describedmụaka kọwara na enwere mmetụta nke "akwupụtara" na "mgbagwoju anya". Nke a metụtara nke a karịsịa mgbe ha hụrụ ihe na-akpali agụụ mmekọahụ n'okpuru afọ 10.
Nke a nwere ike iju ndị nne na nna anya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụtakwu ihe, lee anyị Ntuziaka ndị nne na nna na Intanet . Ebumnuche ya bụ inyere ndị nne na nna na ndị na-elekọta ha aka ịkwadebe mkparịta ụka ahụ siri ike gị na ụmụ gị ga-enwe na ịhazi nkwado na ụlọ akwụkwọ ma ọ bụrụ na achọrọ. Kent ndị uwe ojii dọọ aka na ntị na ndị nne na nna nwere ike gbaa akwụkwọ maka 'sexting' ụmụ ha ma ọ bụrụ na ha bụ ọrụ maka nkwekọrịta ekwentị. Lee akwukwo anyi banyere sexting na iwu na Scotland Na maka ịbanye na England, Wales na Northern Ireland.
Anyị ewepụtala usoro nke FREE Atụmatụ atụmatụ maka ndị nkuzi ga-emeso "Okwu Mmalite nke Mmekọahụ"; "Mmekọahụ na ụbụrụ nwa"; “Mmekọahụ, Iwu ahụ na Gị”; "Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ n'ule"; "Lovehụnanya, Mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ"; "Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na Ahụike Echiche", na "Nnukwu Ahụhụ Porn". Ha nwere ọtụtụ ihe na-enye ọ ,ụ, ihe ọ funụ na mmekọrịta mmekọrịta na akụrụngwa nke na-enye ohere maka ụmụ akwụkwọ iji kwurịta okwu ndị a niile Enweghị ụta ma ọ bụ ihere, naanị eziokwu, ya mere ndị mmadụ nwere ike ịme nhọrọ dabere na ya.
Ihe omumu ndi a dikwa nma maka ulo akwukwo ndi okwukwe. Enweghị foto ndị gba ọtọ. Asụsụ ọ bụla nke na-emegide ozizi okpukpe nwere ike gbanwee.
Foundationgwọ Ọrụ Na-enyocha Nyocha
Wardkwụ wardgwọ ahụ na-enyocha nyocha ọhụụ kwa ụbọchị ma tinye ihe mmepe na ngwa anyị. Anyị na-ewetakwa nyocha nke anyị, ọkachasị reviews nke nyocha ohuru iji mee ka ndi ozo nwee ike ichota ihe ohuru.
E nwere ugbu a ọmụmụ asaa nke gosipụtara njikọ na-akpata njikọ dị n'etiti egwu egwu na-emerụ ahụ ebili site n'iji ya eme ihe.
Na Thelọ Nkwụghachi ụgwọ anyị na-akọ akụkọ akụkọ site na ọtụtụ puku ndị ikom na ndị inyom ndị zụlitere nsogbu na-akpali agụụ mmekọahụ ịntanetị. Ihe omuma a nke ezighi ezi bara uru na ichota usoro ndi ugbua nke nwere ike iwe ogologo oge iji gosiputa na nyocha akwukwo. Ọtụtụ enyochala ịkwụsị ịornụ ere ma nweta ọtụtụ uru ọria na ahụ. Lee nwa okorobịa aakuko.
"Addiction addictionụ ọgwụ ọjọọ agụụ mmekọahụ"
Companieslọ ọrụ ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ebutela ụzọ na mmepe ịntanetị na imewe. Njupụta gabigara ókè site na ịntanetị na-eme ka ụbụrụ mepụta agụụ siri ike maka ihe ndị ọzọ. Ọchịchọ ndị a na-emetụta echiche na omume onye na-egwu porn na oge. Maka ọnụọgụ ndị ọrụ na-arịwanye elu nke a nwere ike iduga mmebi omume mmeko nwoke na nwanyi. Nchoputa a meputara n'oge na-adịbeghị anya site na mmegharị nke iri na otu nke Nchịkọta Ahụ Ike Worldwa nke Ahụ Ike (wa (ICD-11) gụnyere egwu egwu na igbo agụụ mmekọahụ. Enweghi ike ichikota egwu na igbo onwe ya dika nsogbu nke ndi mmadu riri aru ma obu ihe omuma nke ICD-11.
Dị ka nchọpụta ọhụrụ, ihe karịrị 80% nke ndị na-achọ enyemaka ahụike maka mkpesa omume mmekọahụ rụrụ arụ na ha nwere nsogbu metụtara nsogbu porn. Lelee ihe a magburu onwe ya Okwu TEDx (Nkeji 9) site na Jenụwarị 2020 site na Mahadum Cambridge bụ neuroscientist a zụrụ azụ Casper Schmidt iji mụta banyere "Nsogbu Ọjọọ Mmebi".
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ taa bụ 'ike nrụpụta ihe' n'ihe gbasara oke dị na ọkwa mkpali, ma e jiri ya tụnyere foto gba ọtọ nke ọbụlagodi 10 ma ọ bụ 15 afọ gara aga. Iji ya eme ihe bụ nhọrọ onwe onye, ​​anyị apụghị ịmachibido ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ iwu kwadoro maka ndị okenye, mana a ga-echekwa ụmụaka. Aka na-egbo onwe ya agụụ mmekọahụ gabiga ókè, o nwere ike ịkpatara ụfọdụ ndị nsogbu ahụike na uche. Anyị chọrọ inyere ndị ọrụ aka ịnọ n'ọnọdụ ịme 'ọkwa' dabere na ihe akaebe kachasị mma site na nyocha dị ugbu a na nhọrọ mgbake akara, ọ bụrụ na achọrọ. Oge oge ikpochapụ mmekpa ahụ, ma ọ bụ ibelata ugboro ole, bụ ihe niile gbasara ịgbake site na ihe riri ahụ ma ọ bụ ọnọdụ mmekọahụ na ihe isi ike na nsogbu mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ - ọ dịghị ihe ọzọ.
Anyị na-agbasa ozi iji belata ụmụaka mfe ịntanetị. Ọtụtụ nke research akwụkwọ akụkọ na-egosi na ọ na-emebi ụmụaka na ọkwa ha nke ụbụrụ ụbụrụ. Enweela ịrị elu dị egwu na mmejọ ụmụaka na ụmụaka n'ime afọ 8 gara aga yana mmerụ ahụ metụtara mmekọahụ dịka ndị ọkachamara ahụike gara bụ ndị gara ụlọ akwụkwọ anyị na ikekwe ọnwụ. O jikọtara ya na ime ihe ike n'ụlọ, nke ụmụ nwoke na-emekarị megide ụmụ nwanyị.
Anyị na-akwado atụmatụ gọọmentị UK iji manye nkwenye afọ dị irè maka saịtị ndị gba ọtọ azụmahịa na saịtị mgbasa ozi ka ụmụaka ghara ịsụ ngọngọ na ya ngwa ngwa. Ọ gaghị edochi mkpa mmụta gbasara ihe egwu. Oleekwa uru ọ ga-abara anyị ma ọ bụrụ na anyị emee ihe ọ bụla? Ụlọ ọrụ porn nke ọtụtụ ijeri dollar. Gọọmenti UK na-ezube ime ihe na-akpali agụụ mmekọahụ dị site na mgbasa ozi mgbasa ozi na ebe nrụọrụ weebụ porn na Iwu Nchedo N'ịntanetị. O yighị ka ọ ga-abụ iwu, agbanyeghị, ruo na njedebe nke 2023 ma ọ bụ mmalite 2024 kacha mma.
Ozi dị na webụsaịtị a nwere ike inyere ndị mmadụ aka imeziwanye ohere ha nwere ịnụ ụtọ mmekọrịta nwoke na nwanyị na-aga nke ọma na nke ịhụnanya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye isiokwu ọ bụla metụtara ya, biko anyị mara site na ịkpọtụrụ anyị na info@rewardfoundation.org.
Wardlọ Nkwụghachi ụgwọ na-eme enyeghị ọgwụgwọ ma ọ bụ nye ndụmọdụ gbasara iwu. Agbanyeghị, anyị na-eme ụzọ mkpọchi iji gbakee maka ndị ejirila bụrụ nsogbu. Ebumnuche anyị bụ inyere ndị okenye na ndị ọkachamara aka ịnweta ihe akaebe na nkwado iji nye ha ohere ịme ihe kwesịrị ekwesị.
Porn ịntanetị bụ n'efu, mana ụmụaka na -akwụ ọnụ ahịa ya
Ụgwọ Ụgwọ Ọrụ, 15 Calton Road, Edinburgh, EH8 8DL: Scottish Charitable Incorporated Organisation SC044948